Home » Drama, Essays.. » နတ် လူ သာဓု ကောင်းချီးပေးစေသောဝ်…..
အခု သဘာဝတရားရိပ်သာကလည်း ခိုကိုးရာမဲ့ ဂီလာန တွေအတွက် အားထားစရာနေရာဖြစ်လို့ အခုလိုစုပေါင်းပြီး လှူဖြစ်လိုက်တာ ၀မ်းသာလှပါတယ်။
အန်တီမမရဲ့ ဒါနအတွက်လည်း သာဓု ၃-ကြိမ်ခေါ်ပါရစေ…
.ကျောက်စ် နာဂစ်က ၂၀၀၈ မှာ ဖြစ်တာ။ ဓမ္မာရုံလှူ လိုက်တာ မထင်ဘဲ အသက်ကယ်ပြီး ဖြစ်သွားတယ်နော်။ မျှစ်တို့ကတော့ နာဂစ်မှာ အိမ်ပြို သွားတယ်။ အခု သဘာဝရိပ်သာ အလှူ ကြီးအတွက်လည်း အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မလှူ နိုင် မတမ်းနိုင်သေးဘူး။ မရှိလို့ မလှူ ၊ မလှူ လို့ မရှိဆိုတဲ့ ဗမာ စကား ဒီတစ်ခါတော့ မှန်သွားပြီ အဟိ။
မျှစ်ရေ … အမှန်ပြင်လိုက်ပါပြီ… ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…
၂၀၀၂ က သိန်း၇၀နဲ့.. ရန်ကုန်မှာ မြေ၀ယ်ထားရင်..ခုဆို..သိန်းရာထောင်…
သဂျီးရဲ့ ၅-ဒေါ်လှအတွက်လည်း… သာဓု
သာဓု သာဓု သာဓုပါကျောက်စ်ရေ။ ကိုယ့်အလှုအတွက်လဲသာဓုပါ။ ဓမ္မာရုံဒါယိကာကြီးအတွက်လဲသာဓု သာဓု သာဓုပါ
ဂဇက်အဖွဲ့ကို မိသားစုဝင်ဖြစ်ချင်ရင် နောင်ဘ၀အထိစောင့်စရာမလိုပါဘူး ကျောက်စ်ရယ်။
အနည်းဆုံး ကြောင်တစ်ကောင်တော့ ရမယ်။
.သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါဗျား…
.၂၀၀၂ က သိန်း၇၀ နဲနဲနောနောမဟုတ်..ဆနွန်းကား ၃စီးလောက်ဝယ်လို့ရတယ်
တကယ်ဆြာမိုက်ရဲ့ …. ရေစက်ချချိန်မှာ အကြီးအကျယ်နင်နေတာ…
ရေစက်ချပွဲမှာ ဦးကျောက်ဖြစ်သွားမယ့်ပုံကို မြင်ယောင်မိတယ်….။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ပိုင်းကိုယ့်အလှူက အသက်ကယ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးတည့်သွားဆိုလို့….၀မ်းသာစရာပါပဲ…။
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါဗျာ…
ခုလို အလှူကို ကုသိုလ်မျှဝေပေးတဲ့အတွက် သာဓု သာဓု သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်မိပါတယ်ရှင်။ အမြဲတမ်းလည်း လှူနိုင်တမ်းနိုင်ပါစေလို့ မနော မေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင့်။
သာဓုပါဗျ …. ဒီလောက်ရင်းနှီးနေသူချင်း ဖိတ်စာမကမ်းတာ ချိတ်နာဒယ်…
ဦးကျောက် / မသဲ/ မဝေတို့ရဲ့ကောင်းမှူ့နဲ သဘာဝတရားရိပ်သာကိုသိခွင့်လှူခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်
ဟွင့်…. ကျေးကျေး တင်စရာမလိုပါဘူးဂျ…
လူဒပိုင်း နတ်ဒပိုင်း ဝင်ပီးသာဓုခေါ်လို့ရလားဗျ
ဖေ့ဘုတ်မှာအပြိုင်အဆိုင်တင်နေကျတဲ့ နိုင်ဂံဒဂါက စားစရာတွေအပါအဝင်ပေါ့ ခိခိ
ဟီ ဟိ …. သာမီးတို့ မောင်နှံ စာပေးစာယူ သင်တန်းတက်ပါလေ…
သာမင် (သာဓု + အာမင်) :))
နက်ပီ (ခ) ဒိုင်ရာပါ (ခ) အနှီး သင်တန်း တွေ နဲ့ မအားတဲ့ကြားက စာလေးတွေ ရေးပြီးမျှ လို့ ကျေးဇူးပါ။
ဒီအတွက် ကျွန်မလဲ “သာမင်” :))
သူများကို ပြောတဲ့ မောင်မောင်ညို ရော။ ကြားလားရှင့်။
အရီးရေ… ကျောက်စ်တော့ ဗိုက်ကလေးကို ဥ ထားရတာပဲ…
ကျောင်းဒကာကြီး ဦးဦးကျောက်ခဲ သာဓုပွားကာ ပိတိနဲ့ဖတ်သွားပါတယ် နော်
မရည်ရွယ်ပဲ အကျိုးဖြစ်သွားတယ် ဆြာခရေ…
.အလို ကိုမိုးမင်းသားပါလား။ နွေပေါက်ခါနီးမှ ပြန်ပေါ်လာတယ်။
ဟီ ဟိ…. လမ်းဆုံးအထိမှ မရောက်တာကိုး…
လှူဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ အန်တီအေး…
.အသိတစ်ယောက်က တီဘီ ဖြစ်တယ်။ နဂို သိထားတာက တီဘီဖြစ်ရင် ငွေသောက်သောက်လဲ ကုန်မယ်လို့ သိထားတာလေ။ ဒါနဲ့ သူက ရန်ကုန်တက်ပြီး ဆေးကုတော့ ကုသခပဲ ယူပြီး ဆေးဝါးဘိုး လုံးဝ မပေးခဲ့ရဘူးတဲ့။ ဆေးယူပြီး ပြန်လာတော့ သူက ဆေးကိုမသောက်ချင်ဘူးလုပ်ပါရော။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဆေးတွေ အလကားပေးလိုက်တာ ဒိတ်လွန်ဆေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အပေါစားဆေးတွေဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ ကျမကိုလည်း ပြောပြတယ်။ ကျမလည်း ဦးနှောက်ခြောက်ရတာပေါ့။ ရက်တွေတော်တော်ကြာမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် တီဘီဆေးလှူ ထားတဲ့အကြောင်း ဂျာနယ်ထဲမှာသတင်းတိုလေးအဖြစ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတာပြန်သတိရတယ်။ တီဘီဝေဒနာရှင်လည်း ဆေးမှန်မှန်သောက်ပြီး အခုဆို ၀ဖီးလို့ ကျန်းမာနေပါပြီ။
မျှစ်ရေ အဲသည့်လို အကျိုးရှိတဲ့ အလှူမျိုးကိုပဲ စိတ်ပါလက်ပါ လှူချင်တာပါ…
~~~I AM SO GLAD WE ARE BEST DONORS~~~
အလှူဖြစ်မြောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့လို့ သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါခင်ဗျား…
ဓမ္မာရုံအလှူက မလတ်ပြောသလိုပဲ ဒီရွာသားတွေ နာဂစ်ဘေးကလွတ်ဖို့ ဖြစ်လာတာပါပဲ။အခုဆို တွေးကြည့်ရင် ပီတိဖြစ်စရာပါ။လေးလေးနက်နက် သာဓုခေါ်ပါတယ် ဦးကျောက်ရေ။
အစ်မဒုံ ပြောတာ ထပ်ဖြည့်လိုက်ဦးမယ်။
အတော်လေး ရှက်ဖို့ ကောင်းလာပြီ။
အန်တီဒုံနဲ့ အရီးလတ်ရေ… ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဲ မှတ်လိုက်ပါတယ်…
သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျား….
ဓမ္မာရုံအလှူရှင်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ(ဖတ်ရင်းနဲ့ ရီမိလို့) သာဓုပါ…
​ကျော်​ ​ကျော့်​ကရင်​မ​လေးနဲ့ညားရင်​ အဲ့မှာ အလှူယီိး​ပေးမယ်​ဂျာ
ဖဒိုလင်းထင်… အနှီ ဖားသက်ပြင်းကို တမလွန်ကနေ ဆုံးမတော်မူပါ…
မမနှင်းမွေးမဲ့ သားအတွက် ချွေးမရွေးရင် သများကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားပေးပါလို့ :mrgreenn:
PK ကြည့်ပြီးတော့မှ သူကြီး ဘယ်ကလာလဲ ခုမှ သိတယ် သူက ဒီမြေပေါ်ကမှ မဟုတ်တာလို့ :loll:
မရည်ရွယ်ပေမဲ့ တကယ်လှူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းက အသက်ကယ်ရာဖြစ်သွားတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်မှ မဟုတ်တာ။
အဟိ… အဖေတူ မျိုးကောင်းလေးမို့ ကျောက်စ်သားကိုလိုချင်ရင် စစ်ခင်းရလိမ့်မယ်…
အလှူတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့က ဘုရားလက်ထက်ကလို ချက်ချင်းရွှေမိုးငွေမိုးရွာချပြီး အကျိုးပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ တချိန်မှာတော့ အံ့သြလောက်အောင် အကျိုးပေးသလားလို့
ဟမ်မာယေး… uncle gyi တော့ အချွန်နဲ့မပြီ…
အမျှ… အမျှ… အမျှ… ယူတော်မူကြစေကုန်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထင်မှတ်မျှော်လင့်ထားခဲ့တာထက် အလွန်ပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့လို့ အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပါဗျို့ ။
ဒီအလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဆုံးအထိပါဝင်ဆောင်ရွကနိုင်ခ်ြင်း မရှိခဲ့တာကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ကြနိုင်ပါစေကြောင်းးး
ကိုရင်ဆာမိ အလှူကို မလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ကိုရင့်အလှူပါ …